EMilan ukuya eRoma By Train okanye eRoma eMilan ingaba i-lula kwaye iyanelisa amava. Hayi umzekelo-icatshulwe beautiful! Ungathatha i uloliwe ingabizi ezinokuthatha ixesha elide kune 3 iiyure kodwa ezoLoliwe ukusuka eMilan ukuya eRoma ikuvumela ukuba weqe apha kuyimfuneko zokumisa ukuba ukuhlola. Okanye ungatsiba kuloliwe ongamisiyo weTrenitalia ngesantya esiphezulu kuFreccia, leyo ethatha nje 3 iiyure kwaye 3 imizuzu, ingaphantsi kohambo olupheleleyo ngenqwelomoya! Nokuba yintoni na oyithathayo!
Kunye milancity in italy njengoko yayo eyinkunzi, akumangalisi ukuba iindwendwe umhlambi izigidi zabo Lombardy ngonyaka nganye. Kodwa ngaphaya fashion ozithandayo, plenty ngaphezulu kufuneka-kutyelela iindawo kwi-Lombardy ngingqi Italy ingaba ekhwaza phandle kuvelelwa.
Sikholelwa Emilia Romagna lula lilingana ezinomtsalane ngakumbi yagubha Tuscany kunye Lombardy namaqhuzu iinketho temptingly ukuzithengela ukutya ngaphandle kwaye yokuhlala. Yi i Milancity in italy Eroma Yi-Ukuqeqesha uhambo eyona mfihlo igcinwe kakuhle ngokoluvo lwethu kodwa naseRoma ukuya eMilan ngololiwe! Ukutsiba ngaphandle ngeli sovavanyo kwaye yiya exploring!
Ngaphantsi kokuhamba ngemizuzu engama-30 kwi speed eliphezulu uloliwe e Venice, Padua kakhulu rhoqo disregarded ukususela uninzi visitors. kodwa, lenza kuba mhla mkhulu uhambo ukusuka Venice, kokunikela indalo kusityhilela okuninzi ubutyebi bembali umzi ukuba yake kwaba Thethani enamandla.
Ekhaya Italy ke yesibini oldest ngezifundo, yasungulwa ngo 1222, Padua sele retained i-vivacious atmosphere a ngezifundo town, kunye piazzas emihle kunye izitrato arcaded, Nentabalala cafes nemivalo apho Spritz ikuyo le de rigueur njengemimoya mini ukungena kwabo phakathi kwahlwa. Ungaphoswa ngaphandle!
Ngokuba ubani owayehamba Milan ukuya eRoma nge Trenitalia Oololiwe okanye enye indlela ejikeleze indlela kwaye uyiyo ikhangela a kulinywa nzulu zidibene, ihlala ingenamali, kwaye inyani ngesibindi ulwazi zokuhamba.
Sikucebisa ukuba ungene eGenoa (leyo efana Venice kwaba kanye anamandla maritime kwiriphabliki) fronting i-Ligurian Yolwandle. Uhambisa amava ekrwada ngakumbi real, fumana i-undiluted uluvo imbali, kunye namava obugcisa besixeko esityebileyo kunye izakhiwo oluphawulekayo. One of the top reasons we enjoy it so much is that kukho ubuciko olukhulu kunye neemyuziyam baba baninzi! Ungafumana imisebenzi ngo Caravaggio, Van Dyck. Rubens, Durer kwaye Veronese kwi-Palazzo Bianco kwaye Palazzo Rosso kwaye oglegenericname ezinye Ubudala Ihlabathi masterpieces ngeendlela ezininzi landmarks, efana Palazzo Reale kwaye Galleria Nazionale di Palazzo Spinola. Kukho kanjalo kakuhle imizekelo i-Genoese Yesikolo ka-unguye, bavelele ngenkulungwane ye-17, kwi-Palazzo Blanco.
Isantya esiphezulu seTrenitalia Isantya esiphezulu (AV) oololiwe ashiye kanye okanye kabini Milan Station Central ngeyure yesikhululo eRoma Termini - avareji 90 oololiwe ngosuku. Le yokuqala Trenitalia Amagqabi Uloliwe Central Station Milan kwi 5:00 a.m. Yokugqibela ukuqeqesha Eroma amagqabi milancity in italy at 11:18 p.m.
I-Itali amatikiti oololiwe ahamba ngesantya esiphezulu anezongezo ezinkulu. Iindawo zombane esihlalweni sakho ukuhlawulisa izixhobo kunye neWiFi ebhodini yeFrecciarossa kunye neFrecciargento oololiwe. kunjalo, uphawu luya kwehla ngelixa ungaphakathi imigudu kanti kwizikhululo. Unokuba ne-cafe enkulu yase-Itali emotweni yokutya kuloliwe ngamnye. Njengoko kwakunye njengokuba ixinzelelwa phantsi inqwelo ukutya ezisa okulula, sandwich, kunye neziselo esihlalweni sakho. Ekupheleni imoto ngalinye, uya kufumana yangasese nenala amanqwanqwa yokugcina imithwalo emikhulu.
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “UMilan ukuya eRoma Ngololiwe weTrenitalia” kwi sayithi yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmilan-rome-train%2F%3Flang%3Dxh – (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
europetravel Italybytrain milan milano mila trainjourney ukhenketho